> Resource > Talooyin > Muqaal Raadka: guurka, Text iyo Gaarka Raadka
Aad abuuri doonaa slideshow la saamaynta weyn oo ay ku jirto kala guurka, qoraal, maqal iyo Dhibaatooyinka kale ee gaarka ah? Waxaad ku samayn kartaa oo dhan la DVD Slideshow Builder Deluxe - ah oo dhan-in-mid software slideshow kuu oggolaanaysa in aad ka dhigi duubey yaab leh in qasabno. Waa in looga.
Sidoo kale ka eeg talaabada hagitaan talaabo talaabo si ay u sameeyaan slideshow la saamaynta kala duwan >>
Waa saamaynta muuqaal ah oo u dhexeeya laba ama in ka badan sawirada slideshow ah. Ka hor inta saamaynta guurka muuqan, slide bedelo mid kale si kadis ah oo aan dabiici ahayn. Saamaynta guurka aad slideshow muuqataa siman, dabiiciga ah iyo la yaab leh oo mararka qaarkood.
DVD Muqaal dhise yimaado leh in ka badan 100 saamaynta guurka Doorashadaada, oo ay ku jiraan ku baxayn, kala diri karaa, Slide, ka murugeeysan dib, Circle, 3D Cube, 3D beddesha, iwm Tirada xitaa waaweyn badan PowerPoint. Saamaynta kala guurka Random si toos ah isticmaali doonaa markii dejinta photos barnaamijka, laakiin aad si fudud u badali karto by jiiday iyo kala go'in.
Inkasta oo sawirka qiimihiisu yahay kun oo eray, koob ku dar taabtona waa in ka badan slideshow sawir. Horyaal oo aad noqon kartaa weli boos kasta oo ku saabsan sawirka, ama la dhaceen la saamaynta text dhisay-in ka mid ah DVD Muqaal dhise. Qaar ka mid ah fanaaniinta cusub ku filan sida kuwa xirfad videos.
Waa wax weyn inaan daawado slideshow photo la music soo jeeda. Tusaale ahaan, a songs nabad sawirada dabiiciga ah. Oo waxay u engegi in libdhi ah ka soo saamaynta audio sameeyaan asalka ka sii fiican.
Iyadoo DVD Slideshow Builder Deluxe , waxa kale oo aad ku dari karaysaa dhawaaqa funny qaar ka mid ah si aad u slideshow. Waxaan iyaga ugu yeedho Pre-Audio taas oo ka kooban dhawaaqa xoolaha, dhawaaqa roobka, saacad dhawaaqa, iwm
Raadka Gaarka ah
Saamaynta Gaarka ah ee sawirada iyo videos si fudud u noqon shuqullada aad galay masterpieces. In video ama tafatir image daaqadaha, dooratid saamayn filter jecel yahay, oo aad isla markiiba waxa ay ku eegaan karo.
Dhammaan saamaynta caanka ah ayaa ku jira: Old Photo, xun, Monochrome, Muuse, qasayo, Yellow midabkeeda, Rinjiyeynta, iwm
Marka la soo koobo, by isku intaas oo dhammu waxay saamayn slideshow, DVD Muqaal dhise weaves aad sawiro, videos iyo Cajalado galay slideshow ah Fantastic in daqiiqo. Isku day inaad ka soo.